အင်ဂျင် Gasket ထုတ်လုပ်သူ / Head Gasket ပေးသွင်းသူ 1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အင်ဂျင် Gasket
အင်ဂျင်ထဲမှာ gasket ကဘာလဲ? ခေါင်းကို Gasket သည်အင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှင့်ဆလင်ဒါခေါင်းအကြား compressed ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်တွင်ခေါင်းကို Gasket တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်အအေးနှင့်ရေနံသည်အရည်နှစ်ခုကိုအင်ဂျင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှဆလင်ဒါလက်ကိုင် ဦး ခေါင်းသို့ခရီးသွားခြင်းအဖြစ်အတူတကွရောနှောခြင်း မှစ. အတူတကွရောနှောခြင်းမှစောင့်ရှောက်သည်။
လွင့်မျောနေတဲ့ခေါင်းကိုစီးပြီးကားမောင်းလို့ရမလား။ နည်းပညာပိုင်းအရသင်ကလွင့်သောခေါင်းကို gasket ဖြင့်မောင်းနိုင်သည်။'D အမြဲတမ်းကဆန့်ကျင်အကြံပေး။ Blown Head Gasket အနံ့ကဘာတွေလဲ။ မှားယွင်းသော ဦး ခေါင်း gasket သည်မီးခိုးငွေ့မှမီးခိုးငွေ့များလောင်ကျွမ်းသောမီးခိုးငွေ့များလောင်ကျွမ်းသောတိမ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ thie မီးခိုးသည် Beaket နှင့် Gthaset သို့ကူးယူသည့်ဆလင်ဒါများသို့ပျံသန်းနေသောဆလင်ဒါများသို့ပျံသန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်မားသောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုအပြည့်အဝတံဆိပ်ခတ် gaskets 1D
1D အမှတ်တံဆိပ်၏ Openhaul Kit ကိုဂျပန်တင်သွင်းသောပစ္စည်းများ, ရော်ဘာ Gasket, ဆလင်ဒါကြီးများ, ရေနံတံဆိပ်ခတ်ခြင်း,
အရည်အသွေးမြင့် ဦး ခေါင်း Gasket လက်ကားရောင်းယာဉ် - 1D Auto အစိတ်အပိုင်းများ
Gasket ၏အခန်းကဏ္ is သည်ခိုးယူသော elastic seal ဒြပ်စင်နှင့်ဆလင်ဒါနှင့်ဆလင်ဒါခေါင်းအကြား elastic seal element ဖြစ်သည်။1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ အရည်အသွေးမြင့် gasket လက်ကားရောင်းယာဉ် - 1D Auto Parts Co ။ , Ltd ။
China Professional Auto Gasket ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု
1d; တရုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အော်တို gasket ထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု, 32 ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများ, နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 40,000 PCS ပစ္စတင် 300,000 PCS ပစ္စတင်လက်စွပ်အားကောင်းသောချေးခုခံ, ဖိအား, အပူနှင့်1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် gasket ထုတ်လုပ်သူချေးခုခံ